Mowqifka Madasha Xisbiyada Qaran ee Shirka Dhuusamareeb 3 | Keydmedia
Mowqifka Madasha Xisbiyada Qaran ee Shirka Dhuusamareeb 3
Shirka Dhuusamareeb 3 ayaa fashil noqday kadib markii ay qaadaceen Maamullada Jubaland iyo Puntland, oo qeyb ka ahaa wadahadalladii bishii hore dhacay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madasha Xisbiyada Qaran ayaa Maanta war qoraal ah kasoo saarey mowqifkeeda ku aadan shirka Dhuusamareeb 3, ee xalay fiidkii ka furmay magaaladda Caasimadda u ah Galmudug.
Waxay sheegtay Madasha in rajadii laga qabey Shirka aysan muuqan, islamarkaana madaxad halkaasi ku kulmeysa aysan u dhamayn go'aan ka gaarista arrimaha doorashooyinka, taasoo ay aaminsan tahay inay tahay xaq ay leeyihiin shacabka, oo cid gaar ah isku koobi karin.
Madasha waxay sheegtay in Gudiga Farsamo ee doorashooyinka ee lagu dhisay bishii lasoo dhaafay Dhuusamareeb uusan wax wadatashi ah ugu imaan, islamarkaana uu ka been abuuray warbixinta uu gudbiyay.
Sidoo kale, Madasha waxay ugu baaqdey dhinacyada ku sugan Dhuusamareeb iyo maamullada ka maqan inay u tanaasulaan danta qaranka, islamarkaana dhowraan dareenka shacabka iyo duruufaha dalka uu maraya xiligan.
Dowladda ayaa horey u shaacisay in Shirka Dhuusamareeb 3 ay kawada qeybgali doonaan dhamaan saamileyda siyaasadda, oo ay kamid yihiin Mucaaradka, balse ma aysan dhicin, iyadoo wadahadalladan noqdeen kuwa burburay.
Farmaajo ayaa lagu eedeeyay inuu sabab u ah, kadib markii uu xilka ka qaadey Ra'iisul Wasaare Khayre islamarkaana uu riday xukuumadii fulin lahayn heshiis kasta oo Dowladda iyo Maamullada gaaraan oo ku saabsan nooca doorasho ee la qabanayo.
Madaxweynaha ayaa magacaabin Ra'iisul Wasaare kahor Shirka, waxaana lagu micneeyay arintaasi inaysan daacad ka ahayn wadahadalka, islamarkaana uu doonayo inuu sameysto Mudo korarsi, isagoo u maraya Gollaha Shacabka, oo Xildhibaanadiisa intooda badan uu lacago iyo balan-qaadyo xilal ku iibsaday.